အထွေထွေ – Page3– My Doctor
DrMay ThantSyn	2019-06-15T19:17:31+00:00	June 15th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
📗အရေပြားပေါ်က ပိုးမွှားများ📗 'လူ'ဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ အသိ ဥာဏ်ပညာမှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်သတ္တဝါအားလုံးအပေါ် အောင်နိုင်သူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မျက်စိနဲ့တောင် မမြင်ရတဲ့ ရောဂါပိုးမွှားလေးတွေအတွက်ကတော့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက သားကောင်ပြန်ဖြစ်နေတာကတော့ စေ့စေ့တွေးကြည့်ရင် တရားရစရာ။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ အသာထား..လူ့အရေပြားကိုထိခိုက်စေတဲ့ ရောဂါပိုးတွေအကြောင်းနဲ့တင် အသေးစိတ်ပြောရရင် တစ်ထောင့်တစ်ညပုံပြင်တွေထက် လေးငါးညလောက် ပိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ အတိုချုံ့ပြောရရင် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့် အဓိကပိုးမွှားအုပ်စု (၄)ခုရှိပါတယ်။ သိုင်းစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ဂိုဏ်းကြီး(၄)ဂိုဏ်းပေါ့။ 🔹၁🔹 ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားရောဂါများ (Bacterial skin infections) အရေပြားပေါ်က ထိခိုက်ရှနာတွေကတဆင့် အဖြစ်များပါတယ်။ နဂိုရှိနေတဲ့ မှိုကြောင့်ဖြစ်စေ.. ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကြောင့်ဖြစ်စေ.. အခြားအကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ ယားနေတဲ့ နေရာကို လက်သည်းနဲ့ ကုတ်ရင်းကနေ
DrMay ThantSyn	2019-06-15T19:02:50+00:00	June 15th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
⛈ မိုးရာသီမှာ အသားအရေ ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ⛈ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ..လူမုန်းများနေခဲ့တဲ့ 'နွေ'က ပြက္ခဒိန်ထဲမှာတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့။ သူမရှိတော့ပေမဲ့ သူ့အပူတွေကိုတော့ အားလုံးယူမသွားဘဲ နဲနဲတော့ ချန်ထားခဲ့ပုံပဲ။ မိုးမရွာချိန်တွေဆို ပူလိုက်တာ။ တိမ်ထူနေလို့ နေရောင်မမြင်ရပေမဲ့ UV Index လို့ခေါ်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ညွှန်းကိန်းတွေကတော့ မြင့်တုန်း။ မိုးရေစက်တွေဆိုတာကလည်း အိမ်ထဲကနေ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ထိုင်ငေးနေရရင်သာ 'မိုးလေးဖွဲတုန်းသတိရတယ်..မြင်နေတဲ့ပြတင်းတံခါးဆီပဲ'ဘာညာ ကဗျာဆန်ပေမဲ့ လမ်းပေါ်ကလူတွေအတွက်ကတော့ စိတ်ညစ်စရာ။ စိုစိုစွတ်စွတ်အဝတ်အစားတွေ... စိုထိုင်းဆမြင့်လာလို့ ပူစပ်စပ်နဲ့ တရိပ်ရိပ်ထွက်နေတဲ့ချွေးတွေ..။ အပူရှိန်..ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်..စိုထိုင်းဆမြင့်မားမှု.. ရေစိုချွေးစို အဝတ်အစားတွေ.. ဒါတွေအားလုံးက အသားအရည်ကျန်းမာလှပရေးအတွက်တော့ မဟာရန်သူတွေပဲပေါ့။ ✔ မိုးရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာတွေက ဘာတွေလဲ ?? ပွေး၊ ညှင်း၊
DrMay ThantSyn	2019-06-15T18:45:07+00:00	June 15th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
ဖြစ်လာနိုင်သော မျှော်လင့်ချက် ပျော်ရွှင်မှု လူတိုင်း လိုလို ထီပေါက်ဖို့ သူဌေးဖြစ်ဖို့ စသည်ဖြင့် စိတ်ထဲတွေးကာကြည်နူးကြပါတယ် ထီပေါက်ဖို့က မသေချာပါဘူး ကျန်းမာဖို့က အေထာက်အကျူပုစေသော အစားအစာများ ဆေးဝါးမ်ား မွီဝဲ စားသုံးပေးလို့ရပါတယ် ဒါကသေချာပါတယ် လောဆည် ပြောခြင်တာ ကတော့ အကျိုးများလှတဲ့ ငါးကြီးဆီအကြောင်းလေးပါ ငါျးကီးဆီ ကို လူတိုင်း စားဖူျးကပါတယ် ဒါပေမယ့် ငါးကြီးဆီရဲ့ဆေးဖက်ဝင်ပုံ ကို တစ်တစ်ခွခွ သိသူနည်းလှပါတယ် ၁ ငါးကြီးဆီ နှင့် စိတ်ဖီးမှု ငါးကြီးဆီ ဟာ၃မျိုးရှိပါတယ် DHA,ALA and EPAပါ. အဲထဲက EPA ဟာ စိတ်ဓာတ်ကျတာ စိတ်ဖိစီးတာတွေအတွက် ထိရောက်စွာ လျော့ချပေးပါတယ် ၂ မျက်စိအတွက်ဆေးတပါး
DrMay ThantSyn	2019-06-15T18:29:47+00:00	June 15th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
🔖လူတိုင်းသိတဲ့ 'ပါရာစီတမောလ်'ရဲ့ လူသိပ်မသိတဲ့ အချက်တွေ 🔖 လူမှန်ရင် ခေါင်းကိုက်ဖူးတယ်.. ဖျားဖူးတယ်.. ညောင်းညာကိုက်ခဲဖူးကြတယ်။ ဒီဝေဒနာတွေသက်သာစေဖို့လည်း ဆေးမြီးတို.. တိုင်းရင်းဆေး..ဓာတ်စာ..အနောက်တိုင်းဆေးဝါးတွေကစလို့ နောက်ဆုံးပေါ်ကုထုံးမျိုးစုံအထိ အသုံးချခဲ့ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဖျားရင် ခေါင်းကိုက်ရင် ဘာဆေးသောက်ရမလဲလို့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ လူကို ရုတ်တရက်နှိုးမေးရင်တောင် ဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်လောက်က 'ပါရာ သောက်လိုက်ပေါ့' လို့ပဲပြောမှာပါ။ တကယ်လည်း ပါရာစီတမောလ်ဟာ လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ တော်တော်လေး အရေးပါတဲ့ ဆေးစွမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးရဲ့ သိပ်လူသိမများတဲ့ အချက်လေးတွေ နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ 🎯 ပါရာ (para) လို့ အရပ်ထဲမှာ အတိုကောက်ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ ဆေးဘူးတွေပေါ်မှာ Acetaminophen လို့ ရေးတတ်သလို APAPလို့လည်း ဖော်ပြထားတတ်ပါတယ်။ ဒီနာမည်တွေအားလုံးက N-acetyl-para-aminophenol
DrMay ThantSyn	2019-06-15T18:22:54+00:00	June 15th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
🔖ခေါင်းကိုက်ခြင်းဟာ အခြားရောဂါတွေရဲ့ လက္ခဏာ တစ်ခုလား 🔖 ခေါင်းကိုက်ပုံကိုက်နည်းပေါင်း ၂၀၀ကျော်မက ရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ အန္တရာယ်မရှိလှပဲ စိတ်ဒုက္ခပေးရုံလောက် နေရခက်ရုံလောက်ဖြစ်ပေမဲ့ တချို့ ကတော့ တကယ့်ကို သေလောက်အောင် ကိုက်တယ်လို့ ဆိုရမလို အသက်ထွက်မတတ် ကိုက်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ 🎯 ခေါင်းဘာကြောင့်ကိုက်တာလဲ ?? - အိပ်ရေးပျက်ရင် - မောပန်းနွမ်းနယ်ရင် - ရေဓာတ်နည်းရင် - စိတ်ဖိစီးရင် - ဆေးတွေကြောင့် - မူးယစ်ဆေးတွေသုံးရင် - တုပ်ကွေးဖြစ်ရင် - ဆူညံသံတွေကြောင့် - အအေးမိရင် - ခေါင်းကိုခိုက်မိရင် - အရမ်းအေးတာတစ်ခုခုကို အမြန်စားသောက်မိရင် - သွားပြဿနာကြောင့် -
DrMay ThantSyn	2019-06-15T18:09:19+00:00	June 15th, 2019|Categories: All Articles, အထွေထွေ, အထွေထွေရောဂါများ|
📗ဖျားနာကိုက်ခဲမှုတွေခေါ်လာမဲ့ ရာသီအကူးအပြောင်း📗 ဘယ်အရာမှ မမြဲတဲ့ ဒီလောကကြီးနဲ့ လူသားတွေမှာ သိသိသာသာဖြစ်စေ မသိမသာဖြစ်စေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေကြရပါတယ်။ သီချင်းစာသားလေးနဲ့ပြောရရင်တော့ 'အခြေအနေတွေဟာ အမြဲတမ်း..ပြောင်းလဲနေတယ် အချစ်ရယ်..'ပေါ့။ 'မတည်မြဲခြင်း'ဆိုတာတစ်ခုကလွဲရင် လောကမှာ ကျန်တာ ဘာမှ မမြဲပါဘူး။ ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘယ်ဘက်ကိုပဲပြောင်းပြောင်း တည်ငြိမ်နေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကနေ အသစ်တစ်ခုခုကို ကြုံရတဲ့အခါမှာ ချက်ချင်းရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့ 'နေသားမကျမှု' ပေါ့။ 🎯ဒါဆို ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွေမှာရော..? ပိုဆိုးပါတယ်။ 'နေသားမကျမှု'ဆိုတဲ့ ရိုးရိုးသားသား သူငယ်ချင်းလေး တင်မကပဲ လူဆိုးတွေဖြစ်တဲ့ 'သက်သောင့်သက်သာမရှိမှု'နဲ့ 'ဖျားနာ ကိုက်ခဲမှု' ဆိုတာတွေပါ ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ခုလို 'နွေခေါင်ခေါင်'ကနေ 'ရေဖောင်ဖောင်' ဖြစ်သွားတဲ့ မိုးရာသီအကူးမှာတော့ ဖျားနာကိုက်ခဲမှုတွေ ပုံမှန်ထက်ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ 🎯 ဒီရာသီမှာ